Opel ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သော့ခွံ Opel စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် China Key shell
၂ ခလုတ် Opel Vauxhall Corsa အတွက် Remote Car Key Case Shell Shell Meriva astra hjgd Combo အော်တိုသော့ Fob Micro Switch
၂ ခလုတ် Opel Vauxhall Corsa အတွက် Remote Car Key Case Shell Shell Meriva astra hjgd Combo အော်တိုသော့ Fob Micro Switch အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: Black Button: ၂ Buttons Transponder Chip: အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီမရှိ။ ထူးခြားချက်များ: 1. အကောင်းဆုံးအတွက်အစားထိုးခြင်း။ ကျိုးနေသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များပါသောသော့တစ်ခု။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. သင့်ရဲ့မူရင်းနှင့်အတူဒေသခံသော့ခတ် / ကုန်သည်များကဖြတ် Blade ကိုရယူပါ။ အတွင်းပိုင်းအီလက်ထရွန်ကိုယူပါ။ (immobilizer / transponder chip) ။
Vauxhall Opel Corsa Astra H Corsa ၂ ခုအတွက်ခလုပ်ခလုပ် Remote Car Key Shell
Vauxhall Opel Corsa Astra H Corsa အတွက် ၂ ခလုတ် Remote Car Key Shell ၂ ခုသော့ခတ် Key Fob အစားထိုးအခြေအနေ - ၁၀၀% Brand New အရောင်: Black Button: ၂ Button Key Blank: ဟုတ်ကဲ့ Transponder Chip: အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - အလေးချိန် - ၂၃ ဂရမ် အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ ကျိုးပဲ့နေသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များနှင့်သော့ကိုအစားထိုးရန်။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကိုဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်ယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလနှင့်အတူဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ အတွင်းပိုင်း ele ကိုယူပါ။
23Opel Vauxhall Corsa Vectra Astra jgh အတွက် Key Fob ခေါက်သော့ခလောက်များ HU100 ဓါးဖြင့်ထိုးထားသောဝေးလံသောကားသော့ Shell
23Opel Vauxhall Corsa Vectra Astra jgh အတွက် HU100 Blade ပါသော Remote Car Shell နှင့် Keyboard Folding ခလုတ်များအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အမျိုးအစား: Vauxhall Opel Corsa Vectra Astra jgh အတွက်ကားသော့အိတ် - အလေးချိန် ၃၀ ဂရမ်ပစ္စည်း: ABS + သတ္တုအရောင် - အနက်ရောင်ခလုတ် - ၂3Button Blade - Uncut HU100 Blade Transponder Chip - အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်များ - ဘက်ထရီမရှိပါ - လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ။ Vauxhall Opel Corsa Vectra Astra jgh နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှင့်တူသောအခြားမော်ဒယ်များအတွက်! အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: 100% B ...